Aaway qaybta ugu quruxda badan ee Danube Cycle Path? > Baaskiil
↓ U bood nuxurka ugu muhiimsan
Hadda Danube Cycle Jidka
Marxaladda 5 Melk - Krems
Waa maxay Wachau?
Guga Jidka Wareega Danube ee Wachau
Abrikot ayaa ka soo baxa Wachau
Burburka dhismaha danbe
halkaas in la gaaro
Waa maxay Waddada Wareegga Danube?
Danube waa webiga labaad ee ugu dheer Yurub. Waxay ka kacdaa Jarmalka waxayna ku qulqulaysaa badda madow.
Waxaa jira waddo wareeg ah oo ku taal Danube, waddada wareegga Danube.
Markaan ka hadalno Danube Cycle Path, waxaan inta badan ula jeednaa dariiqa ugu safarka badan ee Passau ilaa Vienna. Qaybta ugu quruxda badan ee waddada wareegtada ee Danube waxay ku taal Wachau. Qaybta Spitz ilaa Weissenkirchen waxaa loo yaqaana wadnaha Wachau.
Socdaalka Passau ilaa Vienna inta badan waxaa loo qaybiyaa 7 marxaladood, celcelis ahaan 50 km maalintii.
Quruxda Jidka Wareega Danube
Baaskiil ku wadista Jidka Wareega ee Danube waa cajiib.
Aad bay u fiicantahay inaad si toos ah baaskiilka ugu dhex waddo wabiga xorta ah, tusaale ahaan Wachau oo ku taal banka koonfureed ee Danube laga bilaabo Aggsbach-Dorf ilaa Bacharnsdorf, ama iyada oo Au ka socota Schönbühel ilaa Aggsbach-Dorf.
in 7 maalmood Passau Vienna
Marka lagu sii socdo Waddada Wareegga Danube
Waa maxay Heuriger?
Baaskiil badbaado leh (wadayaasha baaskiillada ayaa si khatar ah u nool)